Kulli wixii aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan kulayl iPhone iyo siyaabaha loo hagaajin ah
Just furo Google raadinta, iyo saaray "iPhone overheats" sida keywords raadinta. Waxaad ka heli lahayd malaayiin posts, cabashooyinka, iyo maqaalo in ay ugala hadlaan arrintan. Ma aha oo kaliya 6s iPhone ama 6s Plus, laakiin xitaa iPhone 3GS Wajiyadu kululaado arrinta.
Maxaad samayn iPhone bilaabi kulayl?
Inta badan, iPhone ka bilowdey kululaado ay sabab u tahay laba arrimood, sababta ugu horeysay la xiriira in la isticmaalo hawlaha qaarkood, halka mid kale la xiriira heerkulka ku wareegsan qalabka.
IPhone shaqeyn karaan ganaax ku heerkulka u dhexeeya 0 iyo -35º C. Laakiin, tiriska qalabka si heerkulka ka badan -35º C hurin karaan kulayl.
Xusuusnow, processor qalab ee uu bilaabo kululaynta mar kasta oo aad u ordaan codsiyada aad u badan oo ku saabsan telefoonka. Tani waxay ku-jeedo overloads batteriga qalabka iyo telefoonka guud bilaabo kulayl.
Hubi barnaamijyadooda firfircoon iyo barnaamijyadooda soo jeeda Disable u raaxayn feature, noqon farriimaha riix off for barnaamijyadooda aan loo baahnayn.
Booqo cudurka iyo isticmaalka qaybta iyo joojiyo xogta si Apple diraya.
Adigoo isticmaalaya iPhone inta la rakibaa u amraya sidoo kale sababi karaan arrimaha kululaynta in qalabka. Kulayl ku meel gaar ah waxaa laga yaabaa in la yareeyo noloshaada batari, laakiin ma jiraan wax u werwero, nolosha batteriga si caadi ah ugu noqon lahaa dhowr saacadood ka dib.
Sida loo hagaajin kululaado iPhone
In-si ay u joojiyaan kulayl, talaabada ugu horeysa waa in aad qaado waa in la hubiyo in aad iPhone ayaa dhan updates ugu dambeeyey ee lagu rakibay. Apple ayaa sii daayay dhowr updates si ay u xaliyaan arrimaha kulayl qalab ee.
Hubi in codsiyada sida Safari, Bluetooth, Wi-Fi, khariidado, barnaamijyadooda navigation, iyo adeega goobaha lagu demiyo.
Mareenada Phone batari yar marka ay ku Wi-Fi la barbar dhigo 3G, ama shabakadda 4G LTE. Dami xidhiidh xog-xawaaraha sare, iyo bedesho Wi-Fi mar kasta oo aad ku sugan tahay shabakad Wi-Fi.
Ha iPhone soo socda in qalabka dhaadheer kulaylka. Waxaa fogee kiiska halka amraya.
Nasiib darro, haddii bartey qalab aad gaadho heerka ugu dambeeya ee kululaynta, iyo bilaabataa muujinaya digniin ah oo ku saabsan waxa ay qaboojinta hoos ka hor inta sii isticmaalaya, waxaa lagu talinayaa in si deg deg ah noqon hab diyaarad qalab ee. Ka dhig iPhone ka walaacsan in hab horyaalka saacad, iyo demi hab diyaarad oo kaliya marka heerkulku qalab ee ay u muuqataa mid caadi ah ku taabasho.
Shan talooyin si loo joojiyo aad iPhone ka u kululaatid
• Weligaa ha ku dhaafin iPhone gudaha gaari la dhigay
Heerkulka gaariga gudaha ku kici kartaa ama hoos u si degdeg ah ku xiran tahay xaaladaha cimilada. IPhone waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan in heerkulka u dhexeeya 0 iyo -35º C. Haddii qalab la hayo in ka badan ilaa -35º heerkulka C, waxaa laga yaabaa in kululaan oo keeni waxyeellada joogtada ah batteriga iyo qaybaha kale ee telefoonka. Isticmaalka qalabka xaalad qabow gaabin nolosha batari, waayo dhowr saacadood ah. Sidaas, ma jiraan wax u werwero, xataa haddii aad dareento in aad si deg deg ah mareenada batari halka joogo hotel in shan-star raaxada inta lagu jiro fasaxa.
• Ha soo bandhigaan iPhone qorraxdu si toos ah
Inta lagu jiro fasaxa, waxaa laga yaabaa inaad u qorsheeyaan in ay qabsadaan kuwa daqiiqado gaar ah la leh qoyskaaga in camera aad foomka sawirada ama videos. Waxaa lagu talinayaa in aad iPhone gudaha jeldiga suuf ama bac wax dhawro meel ka baxsan qorraxdu si toos ah. Sidii hore loo soo xusay, heerkulka aad u kulul kululaan karaa qalab aad iyo abuuro dhibaatooyin.
• Dami Bluetooth, khariidado, Wi-Fi, iyo adeega goobta marka aan la isticmaalayn
Khubaro Tech iyo xitaa Apple ayaa isku raacay in xaqiiqda ah in waxyaabahan kulka-up karaa iPhone. Sidaas, waxaa lagu talinayaa in iyaga ugu noqda oo kaliya marka la qorsheeyo in aad u isticmaasho. Sidoo kale, barkinta iCloud nidaameed khiyaar Safari.
• Iska ilaali hayo qalab ee ku amraya in meelaha kulul
Waxaa lagu talinayaa in aan goldoloolooyinka aad iPhone u amraya in in ay yihiin meelaha kulul. Haddii aad ka shaqayso warshadaha in aad u baahan tahay in ay sii joogaan dhow kululeeyaha, foornooyinkaaga dhexdooda, microwave, ama wax kasta oo cutubyo kale oo soo bandhigtay in kulaylka, waxaa lagu talinayaa in marnaba aad iPhone u amraya dhow karaya.
• Ka fogow in aad kulan u ciyaaro
Waxaa la arkay in kulan kulka-up ee processor iyo telefoonka oo dhan marka si joogto ah u soo ciyaaray saacadood. Haddii aad xaqiiqsato in aad iPhone waxaa kulaylinta-up si deg deg ah, waxaa lagu talinayaa in ay ka fogaadaan ciyaaro kulan oo waqti aad u badan ku lug leh qalabka.
Xusuusnow, kululaado waa in aan la iska indho tiri. Haddii dhan talooyin kor ku guul daraystaan, waa in aad abuurto dib-up for telefoonka iyo soo celinta aad iPhone la Lugood. Dib-u-soo dajiyo wax walba. Haddii ay tani sidoo kale ma joojin qalabka ka kululaado, waxaa lagu talinayaa in ay soo booqdaan dukaanka tufaax dhow iyo buugga dukaamada waaweyn ee dayactirka.
Guud ahaan, arrinta kulayl u muuqataa in ay kala tagi sababtoo ah Apple ayaa beryahan dambe bilaabay Apple Watch ay in loo baahan yahay in si joogta ah xiriir la leh iPhone ama iPad via Bluetooth. Shirkada ayaa waxa aan ka dhigay in headlines ay sabab u tahay arrinta batari tan iyo markii la bilaabay ee Apple Watch. Sidaas, xataa haddii aad isticmaasho iPhone 4, aad u hesho macruufka 9.0 rakibay.
Best Transfer File Desktop iPhone for Windows / Mac
> Resource > iPhone > Kulli wixii aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan kulayl iPhone iyo siyaabaha loo hagaajin arrintan